read more လုပ်နည်း ~ ဇင်ကို(နည်းပညာ)
10:51:00 am read more လုပ်နည်း No comments
ဇင်ကို လဲကြိုက်တယ် ဘလော့သမားတွေလဲ ကြိုက်မှာပါ ပြန်မျှဝေလိုက်ပါတယ်
အဆင့် 1     Template > Edit HTML > Expand Widget Templates မှာအမှန်ခြစ်ပေးပါ။
အဆင့်2    Ctrl + F ကိုနှိပ်ပြီး ဒီကုတ်လေးကိုရှာပါ  </head>
အဆင့်3    တွေ့ပြီဆိုရင် </head> ရဲ့အောက်မှာအောက်က Code ကို ကူးထည့်ပေးပါ။
အဆင့်4    အရင်ဆုံး Preview နဲ့အရင်ကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေပြီဆိုမှ Save နှိပ်ပေးပါ။
<img src=" ဒီနေရာမှာ ပုံရဲ့ Link ကိုထည့်ပေးပါ။
" border="0" alt="Read Full Post" />
သည်နည်းကတော့ တချို့ဘလော့တွေက read more ပါနေပြီးသားပါ သည်တော့ read more ကိုဘဲရှာရမှာပါ...
တကယ်လို့ ဆက်ဖက်ရန်  ဆိုတာရေးထားရင်တော့ read more ကိုရှာလို့ မတွေကနိုင်ပါဘူးနော်..သတိထားစေလိုပါတယ်.
1.dashboard--> layout- -> Edit HTML 2.   "Expand Widget Templates" မှာအမှန်ခြစ် 3.
"Read More" ဆိုတာကိုရှာ
ပုံလင့်ကိုတော့ မိမိတို့ စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ပြီးး ဖိုတိုရှော့နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ပုံထုတ်ပြီး လင့်ယူရမှာပါ... ကဲ ကျနော်အသင့်ရှာဖွေထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်....
(၁) သူ့ရဲ့လင့်ကတော့ ...... ( http://i.minus.com/ibjDpjPBStrhM4.PNG )
(၂) သူ့ရဲ့လင့်ကတော့.......( http://1.bp.blogspot.com/-IsXnb2aurfs/TsjiKGBs8XI/AAAAAAAAA54/vexbdWMTTrk/s1600/readmore.png )
(၃) သူ့ရဲ့လင့်ကတော့ ...........( http://1.bp.blogspot.com/-VdmtPv-5UYc/TwqJbFOEIrI/AAAAAAAAAuk/8Ks01LebB8g/s1600/Untitled-1.gif )